Diyopost.com :: ‘छातीमा गोली छ, युद्धमा श्रीमती गुमाएँ तर हाम्रा नेताले २ करोड कमिशन लिएर सांसद बनाए’ ‘छातीमा गोली छ, युद्धमा श्रीमती गुमाएँ तर हाम्रा नेताले २ करोड कमिशन लिएर सांसद बनाए’ - Diyopost.com
प्रदेशसभा तर्फ सामानुपातिक सांसद चयनका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र भित्र निकै ठूलो विवाद भयो । शुक्रबार माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा सिन्धुपाल्चोकका पुराना नेता झम्क पराजुली हिमालले प्रदेश नम्बर ३ का नेताहरु झक्कु सुवेदी र हितमान शाक्यमाथि कुटपीट गरेको आरोप समेत लाग्यो । युद्धकालमा हिमाल नामले चिनिएका झम्क पराजुलीले आफ्नी श्रीमती युद्धमै गुमाए । तत्कालीन नेपाली सेनाले चलाएको गालीको दाग अहिले पनि मेटिएको छैन । छातीमा गोलीको दाग लिएर हिमाल युद्धकालदेखि शान्तिकालीन राजनीतिमा सक्रिय छन् । प्रदेश सांसदमा उनको नाम करिब पक्का पक्की भएको थियो । तर, अन्तिममा आएर नेताहरुले आफन्तहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यमा चयन गरेपछि उनी खरो विरोधमा उत्रिए । शुक्रबार पेरिसडाँडामा भएको के थियो ? के साँच्चै हातपात वा कुटाकुट भएकै हो ? दियोपोस्टसँगको कुराकानीमा हिमालले उक्त घटनाबारे यस्तो बताए ।
म पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता भएको नाताले नियमित रुपमा पेरिसडाँडा जाने गर्थेँ । समानुपातिक सांसद फाइनल गर्ने दिन हिजो (शुक्रबार) थियो । सिन्धुपाल्चोक प्रदेश सभा सदस्यका लागि मेरो नााम तीन नम्बर प्रदेशमा पहिलो नम्बरमा थियो । म त्यहाँ पुगेको एक घण्टा अगाडीसम्म सबै नेताहरुले मेरो नाममा सहमति भएको सुचना दिइरहेका थिए । प्रदेश कार्यालयका केही नेताले बधाई पनि दिइरहेका थिए । खस आर्य पुरुषमा म पर्ने पक्का भएकाले पनि मैले त्यो बधाई थापिरहनु स्वभाविक थियो । आधाघण्टाको अन्तरमा फेरबदल भयो । राम बहादुर थापा बादलले लिस्ट लिएर गएपछि मैले बुझ्न थालेँ । केही चलखेल भएको आभास भयो ।
पार्टीले कसकसलाई सिफारिस गर्यो भनेर बुझ्ने मेरो नैसर्गिक अधिकार थियो । म पार्टी पेरिसडाँडा भित्र रहेको मजदुर संगठनको कार्यालय माथिको छत तर्फ लागेँ । त्यहाँ ४÷५ जना अरु पनि थिए । तर, मुख्य तीन नेताहरुसँगै थिए हितमान शाक्य, झक्कु सुवेदी र डिके प्रजापति लगायत अन्य पनि थिए । मैले उहाँहरुलाई सोधेँ,‘किन यस्तो गर्नु भयो ? मलाई चित्त बुझाई दिनुस् ।’
जवाफमा झक्कु सुवेदी निकै गैरजिम्मेवारी पूर्वक प्रस्तुत भए । उनले भने,‘यस्तै हो । यसरी नै गरिन्छ । तपाईंले भनेर हुन्न’ भन्नु भयो । जहाँकी नेताले बोल्ने शब्द उहाँले बोल्नु भएन । निकै रुखो र असिष्ठ व्यबहार थियो ।
मैले प्रश्न सोधेँ,‘ त्यसो भए तपाईंको छोरी सांसद बनाएर हुन्छ ? यहाँ घाइते छुटाइयो, अपाङ्ग, शहिद परिवार, फिल्डमा काम गरिरहेका महिला छुटाइयो । मलाई होइन यहाँ फिल्डमा काम गर्ने महिला पार्नु भए हुन्थ्यो । तर, तपाईंको छोरी त व्यापार गरिराखेको छ ।’
अहिले प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहालकी श्रीमती पसल र जागिर गरेर बसेकी छिन् । उनी पर्ने तर अरु नपर्ने कसरी भयो ?’ मैले यी प्रश्नहरु गरेपछि झक्कुले भन्नु भयो,‘तपाईं बढी कुरा नगर्नुस् ।’ उहाँको शब्दमा निकै रुखोपन थियो । निकै लाज मर्नु अवस्था भयो ।
परिक्षा हलमा आफ्नै छोराछोरीले परिक्षा दिइरहेको बेला बाबु गार्ड बसेर चिट चोराए जस्तो अवस्था भयो । तर, त्यस्तोमा बाबुले समेत नैतिक आधारमा त्यस्तो कक्षामा बस्दैन । आफ्नो नातेदारको मुद्दा फैसला गर्ने इजलाशमा एउटा न्यायाधीश बस्दैन ।
एउटा नेता जुन सर्वहारा वर्गको पार्टीको रुपमा प्रतिनिधत्व गर्ने भनिरहेको छ । जसले १० वर्ष रगत बगायो । त्यस्ता नेताहरु कुनै कार्यालय सदस्यलाई नबोलाई आफ्नै मान्छेका लागि निर्णय गरे । यो मेरो लागि आपत्तिको विषय भयो । मैले यो कुरा के हो भनेर सोधेकै हो । मेरो प्रश्न थियो,‘यो कसरी भयो मलाई बुझाइदिनुस् ।’ तर, उहाँले भन्नु भयो,‘तपाईं बढि नहुनुस् । यहाँ आउने अनुमति कसले दियो ?’
त्यो मेरो पार्टी कार्यालय होइन ? जनयुद्धमा मेरी श्रीमती सहिद भएकी थिइन् । म सहिद परिवारको मान्छे हुँ । मेरो छातीमा सेनाको गोली छ । म घाइते पनि हुँ । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धमा होमिएको मान्छे हुँ । त्यतिमात्रै होइन २०४५÷४६ सालको सिन्धुपाल्चोकको पहिलो विद्यार्थी अध्यक्ष हुँ ।
त्यतिबेला नेकपा मोटो मसाल थियो । सिन्धुपाल्चोकको विद्यार्थी आन्दोलनको पाँचौ विद्यार्थी अध्यक्ष नी मै हुँ । म निरन्तर यो पार्टीमा भएको मान्छे, फिल्डमा भएको मान्छे त अन्यायमा परेको छु । खैर मेरो कुरा छाडिदिउँ । जो फिल्डमा काम गरिरहेका महिलाको नाम छैटौँ सातौँ स्थानमा छ । सहिद परिवारको मान्छेको नाम चौथो पाँचौँ स्थानमा छ । सिता अधिकारी भन्ने मान्छे कसैले चिनेको पनि छैन । महेश्वर दाहालको श्रीमती रे । भावना सुवेदी जो रोल्पाकी नागरिकता छ । चितवनमा विहे गरेको छ, व्यापार गरेर बसेकी छिन् । उनी झक्कुकी छोरी हुन् भन्दैमा पहिलो नम्बर वा दोस्रो नम्बरमा राख्नु पर्छ ?
आङडेण्डी शेर्पा भन्नेसँग २ करोड रुपैयाँ कमिशन लिएको भन्ने सुनिएको छ । यो खबर मलाई होइन विश्व भनिने दोलखाको पूर्व इन्चार्ज गंगा कार्कीले सुनाउनु भएको हो । २ करोड लिएर त्यस्ता मान्छेलाई सांसद बनाउने तर यो आन्दोलनमा लागेका मान्छेलाई पाखा लगाइएको छ । न्याय दिने नेताको गुण यही हो ?
आज हिमाल अर्थात झम्क पराजुलीले हातपात गर्यो र घाइते बनायो भनेर व्यापक प्रचार गरिँदैछ । उहाँहरुको बदमासी छ । गलत चिजको प्रचार गरेर सत्यलाई ढाकछोप गर्दै हुनुहुन्छ । मैले कुटाकुट गरेको होइन । तर, एउटा के सत्य हो भने उनीहरुको झोलामा प्रदेश सांसदको नामावली छ की भन्ने लागेर झोला तानेको हुँ । झोला तान्दा मोबाइल खस्यो भन्ने सुनियो तर मैले देखिनँ ।
एउटा झोला अलि वर सम्म ल्याएँ । तर, त्यहाँ कागजात नभएपछि त्यो झोला वाइसिएल अध्यक्ष दीपशिखा मार्फत झोला बुझाइदिएँ । मैले हातपात गरेको छैन । तर, यस्तै गर्छन् भने म दास बन्न हिँडेको मान्छे होइन । म हनुमान बन्न हिँडेको मान्छे पनि होइन । यी नेताहरुलाई पुजा गर्न आएको पनि होइन । मेरो जीवन स्वयम नाफाको जीवन हो । किन भने मेरो रगत पसिना र जीवन त्यहीँ डुवेको छ । छातीमा गोलीले प्वाल पारेको छ । सामन्तहरुको विरुद्ध लागेको मान्छु हुँ । आफ्नै पार्टी भित्र भएका नवसामन्तहरुका विरुद्ध नलाग्नु र ?
यो बाटोबाट कहाँ पुग्ला माओवादी आन्दोलन ?
माओवादी आन्दोलन विसर्जन तिर गइरहेको देखेको छु । माओवादी आन्दोलनबाट धेरै आशा गर्नुपर्ने म देख्दिनँ । पुराना दुख गरेर आएको मान्छे सबै पाखा लाग्दैछन् । चुल्ठे मुन्द्रेहरुलाई जम्मा गराएर, पैसा उठाइँदै छ । उनीहरुलाई आफ्नो बनाइँदैछ इमानदार कार्यकर्तालाई पराइ बनाइँदैछ । यसले यो आन्दोलन विसर्जनको संकेत गर्दछ । सबै युवा साथीहरुले यसमा विचार गर्नुपर्छ यस्ता क्रियाकलाको घोर विरोध गर्नुपर्छ ।